Canshuur Ma Lagu soo Rogi Karaa Dakhliga Meherada Masaajidada? W/Q: Cali Cabdi Coomay – somalilandtoday.com
Qiyaastii shantii sannadood ee ugu dambeeyey waxa magaalooyinka Soomaalilaan ka bilaabmay in meherada loo leexiyo
inay ka dhacaan masaajidada, halkii markii hore laga tegi jiray hudheelada faraha badan ee hoolalka casriga ah u dhistay inay ku soo jiitaan dadka is-calmaday ee meherka diyaarka u ah. Dadka is-mehersanaya iyo eheloodu waxa ay jecel yihiin in goobtan barakaysan ee gurigii Ilaahay ah inay isku mehersadaan oo ay qaataan sahayda ducad si guurkoodu uu u naajixo. Hasayeeshee waxa jira arrimo kale oo haddii dhinaca kale laga istaago weji kale u yeelaya meherada masaajidada, taasi oo ah inay masaajidadii isu-beddeleen hoolalkii dadka laga kireyn jiray ee lacagta laga samayn jiray, maadaamoo masaajidadii iyo hoolalkii isku lacag noqdeen. Qormadan waxa aynu ku dul-istaagi doonaa hababka ay u shaqeeyaan meherada ka dhaca masaajidadu.